NITYAAMI SHIRKE ဝီကီ၊ အသက်၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ဖျော်ဖြေရေး
ကျော်ကြားသည် ၏ရည်းစားဖြစ်ခြင်း Shantanu Maheshwari
ပုံတိုင်းတာမှုများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) 33-26-32
အချစ် ဝက်ဘ်စီးရီး pm တွင် Selfiewallie (2018)
တီဗီ Nach Baliye9(2019)
မွေးနေ့ မတ်လ ၁၈ ရက် ၁၉၉၄ (သောကြာနေ့)
အသက် (2019 ၌ကဲ့သို့) ၂၅ နှစ်
မွေးရပ်မြေ Vadodara, Gujarat
ဇာတိမြို့ Vadodara, Gujarat
ကျောင်း သူမသည်နယူးဇီလန်၊ အော့ကလန်ရှိကျောင်းမှသူမသည်ကျောင်းတက်ခဲ့သည်။
ဝါသနာ ကခုန်ခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း
ရေးရာ / ရည်းစား Shantanu Maheshwari (သရုပ်ဆောင်နှင့် dancer)
မိဘများ ဖခင် - ဆန်နီရှီ့ခ် (စီးပွားရေးသမား)
အမေ - Bina Shirke (FedEx Express မှ ၀ န်ထမ်း)
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေ Shahid Kapoor က , Ranbir Kapoor က
အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက် Destination ပဲရစ်
Nityaami Shirke အကြောင်းလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Nityaami Shirke ဆေးလိပ်ပါသလား
Nityaami Shirke ကအရက်ကိုသောက်ပါသလား
Nityaami Shirke ကို Gujarat, Vadodara ရှိ Hindu မိသားစုမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Nityaami Shirke ရဲ့ကလေးဘဝရုပ်ပုံလွှာ
အသက် ၂ နှစ်မှာ Nityaami ဟာသူ့မိသားစုနဲ့အတူနယူးဇီလန်၊ အော့ကလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Shirke သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကကခုန်ခြင်းကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်၎င်းကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်မစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါ။
သူမ၏ဘွဲ့လွန်ပြီးဆုံးပြီးနောက် Nityaami သည်မိသားစုတစ်စုသို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရောက်ကာအချိန်အတန်ကြာနေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သူမသည်လအနည်းငယ်အဘို့အ Shiamak Davar ကရဲ့ Dance အကယ်ဒမီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးမော်ဒယ်တာဝန်ကျတယ်။
သူမ၏ဖခင်သည်မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိပရိဘောဂလုပ်ငန်းနှင့်အိန္ဒိယရှိ Aptech Computer Education ကုမ္ပဏီတို့တွင်ရှိသည်။
သူသည်တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးနှင့် Nityaami Shirke
သူမသည်သူမ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းစနစ်ကိုပြုလုပ်သည်။
သူမသည် ALT Balaji ၏ ၀ က်ဘ်စီးရီး“ PM Selfiewallie” နှင့်“ Medically Yourrs” တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
horn blow သီချင်းအတွက်မင်းသမီး
ခွဲစိတ်ကုသမှုစစ်နယ်မြေထဲ ၀ င်ပါ။ ?? ?? ??? ❤️ ?? ‍⚕️? #MedicallyYourrs ယခု streaming! ALTBalaji ကိုသုံးပါ ။ ။ #ALTBalajiOriginal @ektaravikapoor @balajitelefilmslimited @ shantanu.maheshwari @bijayanand @jayna_ruchandani @manasadhiya @ priyanka.arya_ @iamkewaldasani @mayainthefilms @shrutitheactor @subharajput @crimsh @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ g @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ g @ @ @ @ @ @ @ @ w @ @ @ @ @ w @ @ @ w @ @ @ @ @ @ w @ @ @ @ na @ @ @f@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ |
မျှဝေသည် Nityaami Shirke? 10:52 pm တွင် PDT တွင် 2019 မေလ 27, 2019 ရက် (@ nityaami.shirke)
Nityaami သည်“ Big Bazaar”,“ Uber India” နှင့်“ Caratlane” စသည့်တံဆိပ်များစွာ၏တီဗွီကြော်ငြာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
သေးငယ်ပြီးအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း @ big.bazaar အတွက်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ။ ။ ။ ။ ။ #tvc #actor #shoot #nityaamishirke #ad #gingermanentertainment
မျှဝေသည် Nityaami Shirke? 9:27 pm တွင် PDT မှာနိုဝင်ဘာ 1, 2018 ရက်တွင် (@ nityaami.shirke)
Shirke သည် Baarish Lete Aana ၏တေးဂီတဗီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သည် Darshan raval ။
Suuuuper ကဒီကောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ရတာအရမ်းပျော်တယ် အလွန်ထူးချွန်ထက်မြက်သော၊ အလွန်နှိမ့်ချသော @darshanravaldz နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးဂီတဗီဒီယို☔️ ??? @get_repost ဖြင့် #Repost @darshanravaldz ap ap ap Aap လိုဂို၏စျေးနှုန်းသည် kaana kal kal raha hai, ဒီဇင်ဘာ zarur dil se banaya hai ❤️ @indie_music_in @sonymusicindia @sundeep_gosswami @abhislens @naushadeposove #spl
မျှဝေသည် Nityaami Shirke? 10:21 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 17, 2018 ရက်နေ့တွင် (@ nityaami.shirke)
2019 ခုနှစ်တွင်သူမနှင့်သူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူ Shantanu Maheshwari Nach Baliye (၉) ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သည်။
Nach Baliye ရှိ Nityaami Shirke နှင့် Shantanu Maheshwari 9
မွေးဖွားသည့်နေ့စွဲ ajith Tamil မင်းသား
ဒေါက်တာ bhim rao ambedkar ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
mahabharat အတွက် arjun ၏အမည်ရင်း
ဒေါက်တာ babasaheb ambedkar ၏မွေးရပ်မြေ
မွေးဖွား၏ azim premji နေ့စွဲ
ခြေမ varun Dhawan ၏အမြင့်